Spooner House ပြတိုက်က ရင်နာစရာ အဖြစ်နဲ့ ဝိဉာဉ်ကလေးမလေး - For her Myanmar
၂၀၀၅ခုနှစ်တုန်းက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ပလိုင်းမောက်မြို့မှာ မယုံနိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ Spooner Houseဆိုတဲ့ အိမ်ကြီးကို ပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက် မန်နေဂျာဖြစ်သူက အိမ်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အလုပ်သမားတွေ ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရမယ့် ရက်မှာ လုပ်သားတွေ အိမ်အပြင်က တံခါးခေါက်တော့ တစ်ယောက်မှ ထွက်မလာပါဘူး။ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် ဆိုပြီးလည်း ထပ်ခေါက်ရော ရှေးခေတ် ဂါဝန်ဖြူဝတ်စားထားတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက် တံခါးလာဖွင့်ပါတယ်။
Related Article >>> ဝိဉာဉ်တို့ရဲ့ ကလဲ့စားလေလား? အတိတ်က အရိပ်မည်းလား?
အလုပ်သမားတွေက မန်နေဂျာရဲ့သမီးလေးဖြစ်မယ်လို့ ကောက်ချက်ချမိတာကြောင့် မန်နေဂျာရှိမရှိမေးပြီး အလုပ်ဝင်လုပ်နှင့်ကြပါတယ်။ နာရီပိုင်းကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ မန်နေဂျာရောက်လာပြီး တံခါးဖွင့်ထားတာမြင်တော့ အိမ်ထဲ အပြေးဝင်လာကြည့်ပြီး “မင်းတို့ကို ငါ့အိမ်ထဲခိုးဝင်ဖို့ ဘယ်သူက အခွင့်ပေးတာလဲ” လို့ အော်ငေါက်တော့တာပဲ။
အလုပ်သမားတွေကလည်း အံ့တွေသြလို့ပေါ့… အလုပ်သမားတစ်ယောက်က “ဆရာ့သမီးလေးကပဲ တံခါးလာဖွင့်ပေးတာပါ” လို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ မန်နေဂျာက “ဒီအိမ်မှာ ငါမနေမှန်း မင်းတို့လည်းသိတာပဲ၊ ဘယ်ကငါ့သမီးကဖွင့်ပေးရမှာလဲ။ လူမနေတာ ကိုးနှစ်ရှိပြီကွ”လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစကားလည်း ကြားရော.. အလုပ်သမားတွေ အကုန် လုပ်လက်စ အလုပ်တွေအကုန် ရပ်ပြီး လစ်ပြေးကြရောလို့ ဆိုပါတယ်။
Related Article >>> မိုးသည်းည ရဲ့ ကလဲ့စားဝိဉာဉ်
ဒီ Spooner House အိမ်ရဲ့ ရာဇဝင်နောက်ခံကတော့…
၁၈၀၀ခုနှစ်လောက်တုန်းက ဒီအိမ်မှာ မိသားစုတစ်စုနေခဲ့ပါတယ်။ အဖြူရောင်ဂါဝန်နဲ့ ကလေးမလေးကလည်း ဒီအိမ်ကကလေးပဲပေါ့။ သူ့အဖေက တံငါသည်ဖြစ်ပြီး သမီးလေးကို အရမ်းချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူပါ။ ယောက်ျားငါးဖမ်းထွက်တဲ့အချိန် သူမရဲ့ဒေါသတွေမှန်သမျှကို ကလေးအပေါ်ပုံချပြီး ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တတ်ပါတယ်။
ကလေးဖြစ်သူကလည်း သူမအဖေငါးဖမ်းမသွားဘဲ သူမနဲ့အတူ အမြဲတမ်းရှိနေဖို့ ဆုတောင်းပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ငါးဖမ်းထွက်တဲ့ အဖေဖြစ်သူက ပြန်မလာတော့ပါဘူး။ တစ်ရက်လည်းမဟုတ်၊ နှစ်ရက်လည်းမဟုတ် ပြန်မလာတဲ့အခါ မိခင်ဖြစ်သူက အမျက်ထွက်ပြီး “နင့်ကြောင့် နင့်အဖေသေသွားတာ”လို့ ရိုက်နှက် နှိပ်စက်ပြန်ပါတယ်။ နောက်နေ့မှာတော့ ကလေးသေနေတာတွေ့ရပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က အမေဖြစ်သူသတ်တာလို့ ဆိုကြပါတယ်။
တကယ်လည်း အမေဖြစ်သူက သတ်ပစ်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမိန်းမကတော့ “ကျွန်မသမီးသွားတစ်ချောင်းက ပိုးစားနေတာကြာတော့ အဆိပ်တက်၊ တစ်ကိုယ်လုံးပြန့်ပြီး သေသွားတာပါ”လို့ ပြောင်ငြင်းခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ကစပြီး အိမ်ထဲမှာ ကလေးမရဲ့ဝိဉာဉ်ဟာ အိမ်ထဲမှာ လှည့်လည်သွားလာနေပါတော့တယ်။ အိမ်နံရံမှာတွေလည်း အကူအညီတောင်းခံတဲ့ စာသားတွေ ဘယ်ကမှန်းမသိ ပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အဲဒီနားတစ်ဝိုက်မှာ ထွက်ကစားနေတဲ့ကလေးတွေကို “ငါလည်းပါချင်တယ်”ဆိုပြီး လိုက်ခြောက်တတ်ပါသတဲ့…
အခုဆိုရင် Spooner Houseက ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြတိုက်ထဲ သွားလည်ဖြစ်တဲ့အခါ “အက်ဘီဂေးလ်ရေ ငါနဲ့လာဆော့ပါ”လို့ခေါ်ကြည့်ပါ။ အဖြူရောင်ဂါဝန်နဲ့ အရုပ်တစ်ခုချီထားတဲ့ကလေးက “လာဆော့ကြမယ်”လို့ပြန်ဖြေရင် ဒါဟာ အပေါ်က ဇာတ်လမ်းထဲက သနားစရာ မိခင်ရင်းသတ်တာ ခံခဲ့ရတဲ့ အက်ဘီဂေးလ်လေးပါပဲ။
၂၀၀၅ခုနှဈတုနျးက အင်ျဂလနျနိုငျငံ ပလိုငျးမောကျမွို့မှာ မယုံနိုငျစရာ အဖွဈအပကျြတဈခု ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ Spooner Houseဆိုတဲ့ အိမျကွီးကို ပွတိုကျတဈခုအဖွဈ ပွောငျးလဲဖှငျ့လှဈဖို့အတှကျ မနျနဂြောဖွဈသူက အိမျသနျ့ရှငျးရေးအတှကျ အလုပျသမားတှေ ငှားရမျးခဲ့ပါတယျ။
သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးရမယျ့ ရကျမှာ လုပျသားတှေ အိမျအပွငျက တံခါးခေါကျတော့ တဈယောကျမှ ထှကျမလာပါဘူး။ နောကျဆုံးတဈခေါကျ ဆိုပွီးလညျး ထပျခေါကျရော ရှေးခတျေ ဂါဝနျဖွူဝတျစားထားတဲ့ ကလေးမလေးတဈယောကျ တံခါးလာဖှငျ့ပါတယျ။
Related Article >>> ဝိဉာဉျတို့ရဲ့ ကလဲ့စားလလေား? အတိတျက အရိပျမညျးလား?
အလုပျသမားတှကေ မနျနဂြောရဲ့သမီးလေးဖွဈမယျလို့ ကောကျခကျြခမြိတာကွောငျ့ မနျနဂြောရှိမရှိမေးပွီး အလုပျဝငျလုပျနှငျ့ကွပါတယျ။ နာရီပိုငျးကွာပွီးတဲ့နောကျမှာ မနျနဂြောရောကျလာပွီး တံခါးဖှငျ့ထားတာမွငျတော့ အိမျထဲ အပွေးဝငျလာကွညျ့ပွီး “မငျးတို့ကို ငါ့အိမျထဲခိုးဝငျဖို့ ဘယျသူက အခှငျ့ပေးတာလဲ” လို့ အျောငေါကျတော့တာပဲ။
အလုပျသမားတှကေလညျး အံ့တှသွေလို့ပေါ့… အလုပျသမားတဈယောကျက “ဆရာ့သမီးလေးကပဲ တံခါးလာဖှငျ့ပေးတာပါ” လို့ပွနျဖွတေဲ့အခါမှာ မနျနဂြောက “ဒီအိမျမှာ ငါမနမှေနျး မငျးတို့လညျးသိတာပဲ၊ ဘယျကငါ့သမီးကဖှငျ့ပေးရမှာလဲ။ လူမနတော ကိုးနှဈရှိပွီကှ”လို့ပွနျဖွခေဲ့ပါတယျ။ အဲဒီစကားလညျး ကွားရော.. အလုပျသမားတှေ အကုနျ လုပျလကျစ အလုပျတှအေကုနျ ရပျပွီး လဈပွေးကွရောလို့ ဆိုပါတယျ။
Related Article >>> မိုးသညျးည ရဲ့ ကလဲ့စားဝိဉာဉျ
ဒီ Spooner House အိမျရဲ့ ရာဇဝငျနောကျခံကတော့…
၁၈၀၀ခုနှဈလောကျတုနျးက ဒီအိမျမှာ မိသားစုတဈစုနခေဲ့ပါတယျ။ အဖွူရောငျဂါဝနျနဲ့ ကလေးမလေးကလညျး ဒီအိမျကကလေးပဲပေါ့။ သူ့အဖကေ တံငါသညျဖွဈပွီး သမီးလေးကို အရမျးခဈြပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကလေးရဲ့မိခငျဖွဈသူကတော့ ရကျစကျကွမျးကွုတျသူပါ။ ယောကျြားငါးဖမျးထှကျတဲ့အခြိနျ သူမရဲ့ဒေါသတှမှေနျသမြှကို ကလေးအပျေါပုံခပြွီး ရိုကျနှကျနှိပျစကျတတျပါတယျ။
ကလေးဖွဈသူကလညျး သူမအဖငေါးဖမျးမသှားဘဲ သူမနဲ့အတူ အမွဲတမျးရှိနဖေို့ ဆုတောငျးပါတော့တယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈနမှေ့ာတော့ ငါးဖမျးထှကျတဲ့ အဖဖွေဈသူက ပွနျမလာတော့ပါဘူး။ တဈရကျလညျးမဟုတျ၊ နှဈရကျလညျးမဟုတျ ပွနျမလာတဲ့အခါ မိခငျဖွဈသူက အမကျြထှကျပွီး “နငျ့ကွောငျ့ နငျ့အဖသေသှေားတာ”လို့ ရိုကျနှကျ နှိပျစကျပွနျပါတယျ။ နောကျနမှေ့ာတော့ ကလေးသနေတောတှရေ့ပွီး ပတျဝနျးကငျြက အမဖွေဈသူသတျတာလို့ ဆိုကွပါတယျ။
တကယျလညျး အမဖွေဈသူက သတျပဈတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီမိနျးမကတော့ “ကြှနျမသမီးသှားတဈခြောငျးက ပိုးစားနတောကွာတော့ အဆိပျတကျ၊ တဈကိုယျလုံးပွနျ့ပွီး သသှေားတာပါ”လို့ ပွောငျငွငျးခဲ့ပါတယျ။
နောကျတဈနကေ့စပွီး အိမျထဲမှာ ကလေးမရဲ့ဝိဉာဉျဟာ အိမျထဲမှာ လှညျ့လညျသှားလာနပေါတော့တယျ။ အိမျနံရံမှာတှလေညျး အကူအညီတောငျးခံတဲ့ စာသားတှေ ဘယျကမှနျးမသိ ပျေါပျေါလာတတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ တဈခါတလေ အဲဒီနားတဈဝိုကျမှာ ထှကျကစားနတေဲ့ကလေးတှကေို “ငါလညျးပါခငျြတယျ”ဆိုပွီး လိုကျခွောကျတတျပါသတဲ့…
အခုဆိုရငျ Spooner Houseက ပွတိုကျတဈခုဖွဈပွီး ပွတိုကျထဲ သှားလညျဖွဈတဲ့အခါ “အကျဘီဂေးလျရေ ငါနဲ့လာဆော့ပါ”လို့ချေါကွညျ့ပါ။ အဖွူရောငျဂါဝနျနဲ့ အရုပျတဈခုခြီထားတဲ့ကလေးက “လာဆော့ကွမယျ”လို့ပွနျဖွရေငျ ဒါဟာ အပျေါက ဇာတျလမျးထဲက သနားစရာ မိခငျရငျးသတျတာ ခံခဲ့ရတဲ့ အကျဘီဂေးလျလေးပါပဲ။
Tags: daughter, ghost, Horror, Kid, Spooner, White dress